Others – Page3– Gentleman Magazine
သင့်ဘ၀ကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်စေနိုင်မည့် အလေ့အကျင့်(၇)ခု
သင့်ဘ၀ကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်စေနိုင်မည့် အလေ့အကျင့်(၇)ခု (Zawgyi) လူတစ်ယောက်ရဲ့ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုဆိုတာတွေဟာ အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းရာမှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေ၊ အာရုံလွင့်ပျံစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အလုပ်ကို ဦးစားပေးတတ်သူတွေကတော့ အောင်မြင်မှုဆီကို ပိုပိုပြီး နီးစပ်အောင် သွားနိုင်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆီသို့ သွားရာလမ်းမှာ
အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တဲ့အရာ (၅)ခု
အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တဲ့အရာ (၅)ခု (Zawgyi) အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာ သာမန်သူတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း လျို့ဝှက်ထားတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့က အခြားသူတွေလျှောက်တဲ့လမ်းအတိုင်း လျှောက်ပြီး ထူးမခြားနားလမ်းကို မလိုက်ကြပါဘူး။ အောင်မြင်မှုအတွက် နည်းလမ်းတွေ၊ အတုယူစရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ အောင်မြင်သူတွေ
အပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ (Zawgyi) ယောင်္ကျားလေးတွေ အများစုက အပြာကားကြည့်ရတာကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်ထက်ပိုပြီး ကြည့်နေမယ်၊ မကြည့်ရမနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အပြာကားတွေကို စွဲလမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားကြမလဲ…..??? ၁။ တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်ဆောင်ပါ။ အပြာကားစွဲလမ်းမှုကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ တကယ့်
အလုပ်မှာ စိတ်မပါတဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ အားပြန်ဖြည့်လိုက်ပါ (Zawgyi) အလုပ်ထဲမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး လုပ်ကြတဲ့ နေ့တွေရှိသလို၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ လုံးဝအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ရှိမှာပါ။ များသောအားဖြင့် မွန်းလွဲ(၃)နာရီလောက်ဆိုရင် အပျင်းရောဂါထလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အလုပ်လေးတွေကိုတောင်မှ လုပ်ချင်စိတ်မရှိလောက်အောင် ခက်ခဲနေတတ်ပြီး အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ပဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး
သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် အလေ့အကျင့်(၄)ခု
သင့်ဘ၀ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် အလေ့အကျင့်(၄)ခု (Zawgyi) အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ မရှိဘူးဆိုရင် ဘ၀က ပိုမိုခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ပေးပြီး ဘ၀ကို အလွယ်တကူဖြတ်သန်းမလား ဒါမှမဟုတ် သက်ဆောင့်သက်သာနေပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်မလားဆိုတာပါပဲ။ အောင်မြင်သူတိုင်းကတော့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘ၀ထက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုပဲ ပျိုးထောင်တတ်ကြပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာ ဘာမှအကျိုးမထူးဘူးလို့
ထူးခြားသော ငွေစာရင်းတစ်ခု (Zawgyi) သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေစာရင်းထဲကို မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ငွေကျပ် ၈၆၄၀၀ ထည့်ပေးတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုရှိတယ် ဆိုပါစို့။ ဒီဘဏ်မှာ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဘဏ်ကထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ငွေကျပ် ၈၆၄၀၀ ကို နေ့မကူးခင် အကုန်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသုံးနိုင်လို့ ကျန်နေတဲ့ငွေကိုတော့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပထမဆုံးအကြည့်မှာတင် သတိထားမိနိုင်သည့်အရာများ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပထမဆုံးအကြည့်မှာတင် သတိထားမိနိုင်သည့်အရာများ (Zawgyi) မိန်းကလေးတွေဟာ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သတိထားမိလိုက်တဲ့အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပုခုံးပေါ်မှာ ဖုန်အနည်းငယ်ပေကျံနေတာက စပြီး ဖိနပ်အရောင်ကွက်နေတာအထိ ခေါင်းအစခြေအဆုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားချင်တယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး(၁၀)စက္ကန့်အတွင်းမှာ သူတို့သတိထားမိနိုင်တဲ့ အရာတွေကို သေချာပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်က
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းရာတွင် စွန့်လွှတ်ရမည့်အရာများ
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ လျှောက်လှမ်းရာတွင် စွန့်လွှတ်ရမည့်အရာများ (Zawgyi) ဘ၀မှာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး လျှောက်လှမ်းတာဟာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်ကို ပြောင်းလဲတာ၊ ၀န်ထမ်းဘ၀ကနေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တာ ဒါမှမဟုတ် သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်တာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀မှာ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း၊ ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း
အောင်မြင်မှုနဲ့အလှမ်းဝေးစေမည့် သင့်ကိုယ်သင်လိမ်လည်မှု (၄)ခု
အောင်မြင်မှုနဲ့အလှမ်းဝေးစေမည့် သင့်ကိုယ်သင်လိမ်လည်မှု (၄)ခု (Zawgyi) သင့်ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးအောင် တားဆီးဟန့်တားနေတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောပုဂ္ဂိုဟ်က သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဝန်းကျင်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘ၀ထဲက အခြားဘယ်သူမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူတချို့က အရမ်းအောင်မြင်ပြီး တစ်ချို့က ထင်သလောက် မအောင်မြင်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ လူတိုင်းမှာ အောင်မြင်လာဖို့ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိကြပါတယ်။
မနက်ခင်းမှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ (၉)ခု
30/06/2017 30/06/2017 escapetravelmagazine
မနက်ခင်းမှာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ (၉)ခု[sg_popup id=6] [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] မနကျခငျးမှာ မလုပျသငျ့တဲ့ အရာ (၉)ခု နတေ့ဈနရေဲ့ မနကျခငျးဟာ တဈနတေ့ာလုံးအတှကျ အရေးအကွီးဆုံးအခြိနျဖွဈပါတယျ။ တကယျအလုပျပွီးမွောကျအောငျမွငျတဲ့နတေ့ဈနဖွေ့ဈဖို့ မနကျခငျးမှာ ဘာတှလေုပျလဲဆိုတာပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ သငျ့မနကျခငျးကို အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးပွီး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့တဈနတေ့ာဖွဈစဖေို့အတှကျ
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ဘာကြောင့် ကျရှုံးရတာလဲ ??? [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ဘာကွောငျ့ ကရြှုံးရတာလဲ ??? (Unicode) အောငျမွငျသူတိုငျး ရိုးသားစှာ ၀နျခံကွကွေးဆိုရငျ သူတို့အားလုံး ကရြှုံးမှုတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့ရတာကို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကရြှုံးမှုတဈခုခငျြဆီကနေ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အဖိုးတနျသငျခနျးစာနှဈခုကို